कान्तिपथ हाईलाईट : अहिले सम्मका मुख्य समाचार, फेवातालमा नग्न फोटोसुट !
पाेखराकाे फेवातालमा विदेशी महिलाको अश्लिल फोटोसुट !
नेपालमा पर्यटक ओइरिने एउटै कारण छ, त्यो हो यहाँको प्राकृतिक सम्पदा। कंक्रिट संरचनाबाट आहत भएका विदेशी पर्यटकका आँखा प्राकृतिक स्वच्छन्द सम्पदामा रमाउन पाउँदा साँच्चिकै राहत महशुस गर्छन्।
आजको पत्रिकामा : सर्वोच्चले माग्यो सीमा रक्षा गर्न नसक्नुको कारण
राजधानीबाट आइतवार प्रकाशित पत्रपत्रिकाले आज विभिन्न शिर्षकमा प्रमुख समाचार छापेका छन् । यसका साथै पत्रपत्रिकाले विभिन्न फरक – फरक विषयका समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएर प्रकाशन गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ४ बजे डाकिएको सचिवालय बैठकले पोलिटब्युरो गठन गर्न लागेको पोलिटब्यूरो गठन गर्दै छ ।
भारतले नेपाली भूमिबाट सेना फिर्ता लैजानुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा दृढ रहेको बताएका छन्।
तनावमा अध्यक्ष डा.बाबुराम !
सत्तासाझेदार दल समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका छन् ।
को हुन् आलम, आदेशकाे अर्थ केहाे ?
आलम विरुद्ध यो अन्तिम फैसला नभए पनि घटना नै नभएको उनको दाबीलाई अदालतको प्रारम्भिक फैसलाले अस्वीकार गरेको छ । प्राप्त प्रमाणको आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने अदालतको ठहर छ ।
कांग्रेस नेता तथा सांसदन थापाको बाख्रा फर्ममा रंगशालाको शिलान्यास !
सरकारी ढुकटीबाट रकम लगेर नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद गगन थापाले बाख्रा पालन गरेको ठाउँमा अहिले रंगशाला निर्माण हुने भएको छ ।
यी हुन् नेपालका १० उत्कृष्ट करदाता (नामसहित)
आन्तरिक राजस्व विभाग कर दिवस मनाउन सुरु गरेदेखि १० विधामा सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेलाई सम्मान गर्दै आएकाे छ।
कालापानी मुद्दामा नेपालले अब के गर्नुपर्ला, यस्ताे छ चर्चित व्यक्तिकाे धारणा ?
सामरीक हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल अहिले संसारकै कमजोर देशहरूको अग्रपंक्तिमै होला । सबैलाई विदितै छ कि हामी शक्ति प्रयोग गरेर गुमेको कुनै पनि भू–भाग फिर्ता ल्याउन सक्दैनाैँ ।
सांसद झाँक्रीको प्रश्न : राजदूतलाई स्पष्टिकरण सोध्ने कि मन्त्रीले भाषण दिने ?
भारतले दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा औपचारिक रूपमा समेटेको र अन्य ठाउँमा पनि सीमा मिचेको छ।
भारतकाे दादागिरी : आर्यघाट पनि खाेस्याे ?
भारतीयहरुको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिले सीमा नाघ्न थालेको छ । गर्दा गर्दा त उनीहरु अहिले महाकाली नदीको किनारामा रहेको नेपालतर्फको स्मसानघाट नै भारतको हो भनी दाबी गर्न थालेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
यी भीआईपी’काे नख्खु जेलमा यसरी बित्दैछ दैनिकी
नख्खु कारागार स्रोतका अनुसार शनिबार बिदाको दिन परेकाले उनलाई लागुऔषध दुर्व्यसनीका थुनुवासँगै राखिएको छ ।
पढाइ भन्ने कुरा सजिलो छैन । अझ परीक्षाको अगाडि केही आएन भने त्यो विद्यार्थीको मानसिक अवस्था नै नाजुक बन्न पुग्छ ।
परीक्षामा उत्तर आएन र जाँच बिग्रियो भने करिअर चौपट हुने डरमा धेरै विद्यार्थी पर्न थालेपछि नेदरल्यान्डको एक युनिभर्सिटीले नयाँ उपाय अगाडि ल्याएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलबस्तुले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शिवनगर नगरपालिका वडा नं. १ मा अत्याधुनिक हात हतिओयार राखेको र प्रहरीले बरामद गरेको भनेर प्रचार गरिएको हतियार प्रहरी आफैले राखेर भ्रमपूर्ण प्रचार गरेको आरोप लागेको छ ।
ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने निष्कर्ष
प्रधानमन्त्री केपी ओली मिर्गौला प्रत्यारोपण नै गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । उपचारमा संलग्न चिकित्सकले नियमित डायलाइसिस वा पुनः प्रत्यारोपण रोज्न उनलाई विकल्प दिएका थिए ।
आज अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी दिवस
यस्तै त हो मौसम, कहिले छिटो त कहिले ढिलो आफ्नो धारमा बहन्छ, त्यस्तै बहन्छन हाम्रा सनातन पर्व अनि उत्सवहरु । दिनहरु क्रमशः छोटा अनि रात लामा हुदैँछन् । छिटै साँझ पर्ने अनि ढिलोगरी विहान हुन थालेको छ ।
नेकपा 'विप्लव'का दुई कार्यकर्ता कर्याप्पै !
दुबै मिर्गौला पिडित दिर्घ भन्छन–मलाई बचाइदिनुहोस् (भिडियाेसहित)
दुबै मिर्गौला फेल भएर उपचाररत २३ बर्षीय दुर्घ बुढाले सहयोगको अपिल गर्नु भएको छ । शनिबार एक अनलाइन टेलिभिजनमा अन्तबारर्ता दिदै उहाँले सहयोगको अपिल गर्नु भएको हो ।
के हो हलो क्रान्ति ? ब्राम्हणले अनौ किन समाए ?
युवा संघ नेकपामा एकता टुंग्याउने पहिलो भातृसंगठन
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु भएको छ। राजधानीको बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा संगठन एकतापछिको पहिलो राष्ट्रिय भेला सुरु भएको हो।
नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४ नेपालको पहिलो संविधान हो। संविधान लागु गर्ने बिषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेको थियो। नेपालको पहिलो कानुन बनाउनका लागी “बैधानिक सुधार समिति” गठन भयो ।
मोबाइलकै कारण किशोर किशोरीहरुले बाल-विवाह गर्न थालेपछि समाजि अभियन्तहरु कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरुले अब माध्यमिक तह कक्षा १२ पास नगेरेसम्म मोबाईल बोक्न नपाउनु पर्ने कानुन निमार्ण हुन जरुरी रहेको भन्दै कडा रुपमा आफ्नो धारण प्रस्तुत गरेका हुन् ।
पर्सामा आगलागी : ५६ बाख्रा र ५० बढी परेवाको मृत्यु
'ब्याक अफ इन्डिया–चाइना' को नारा लगाउदा प्रहरी र नेविसंघबीच झडप
नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले ‘ब्याक अफ इन्डिया’ सहितका नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका छन् ।
भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा राखेको विरोधमा लगातार प्रदर्शन हुँदै आएको छ । सोही क्रममा नेविसंघले आइतबार दिउँसो माइतिघरमा प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनकारीले ‘ब्याक अफ इन्डिया–चाइना’ लेखिएको व्यानर पनि बोकेका थिए । उनीहरुले चीनले पनि नेपाली भूमि मिचेकाले त्यसको पनि विरोध गरेका हुन् । विरोध प्रदर्शनको क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच झडप समेत भएको थियो ।
बिकिनीमा मस्त बलिउड अभिनेत्रीहरु (फोटो फिचर)
बलिउड नायिकाहरु बिकिनी अवतारमा देखिनु त सामान्य भइसकेको छ । बरु नायिकाहरु बिकिनीमा को अझै बढी ‘हट’ देखिने भन्ने चर्चा हुन थालेको छ ।
नायिकाहरु अभिनयका कारणले मात्र नभएर ग्ल्यामर लूकका कारण पनि चर्चामा रहने गर्छन् । हामीले बलिउडका केही तस्वीरहरु यहाँ शेयर गरेका छौँ, जो पछिल्लो समय थप चर्चामा छन् ।
मकवानपुरको भीमफेदी कारागारबाट गएराति कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका एक कैदी फरार भएका छन् । कारागार प्रशासनका अनुसार ३० वर्षका कुलदीपराज धामी फरार भएका हुन् । कारागारका प्रमुख जेलर प्रकाश खनालले कैदीलाई भगाउन कसैको सहयोग रहेको आशङ्का गर्दै कारागार वरिपरि १२ फिटभन्दा अग्लो पर्खाल रहेकाले नाघेर भाग्न एक्लैले सम्भव नरहेकाले अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।
काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–११ डालाबेँसीस्थित बिपी राजमार्गमा स्कुटर दुर्घटनामा परी एक युवतीको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेलका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीका अनुसार काठमाडौँबाट सिन्धुलीतर्फ जाँदै गरेको बा९८प ७५८२ नंको स्कुटर चलाउने क्रममा अनियन्त्रित भई शनिबार दुर्घटना हुँदा स्कुटरमा सवार दुवै घाइते भएको र धुलिखेलस्थित धुलिखेल सामुदायिक अस्पतालमा उपचारपश्चात थप उपचारका लागि नर्भिक अस्पताल काठमाडौँ पठाएकोमा उपचारका क्रममा आज बिहान ३ः०० बजेतिर मृत्यु भएको हो ।
पुरा समाचार पढ्नुहाेस्.......https://www.kantipath.com